Caleemaha kala duwan "Halachi"
Dhaqanka canabku muddo dheer ayaa loo yaqaanaa bogsashada iyo hantida faa'iido leh. Intaa waxaa dheer, iyada canabkeeda qurxoon ee xagaaga siinayaa hoos ah, hooskii isbedelay iyo caawinayaa in la abuuro nabad iyo raaxada guriga. Si ay u koraan a warshad wanaagsan oo qurux badan oo canab ah, waxaa lagama maarmaan ah in la go'aamiyo kala duwan, taas oo ah meesha ugu haboon.
Waxyaabaha kala duwan ee canabka ee Rizamat
Sannad kasta, thanks to dadaalka of breeders, noocyo badan oo sabiib ah u muuqdaan. Tani waa wax fiican, tan iyo saynisyahanada casriga ah ayaa si joogta ah isku dayaya inay hagaajiyaan iska caabbinta dhirta, abuurista "super-variety." Nasiib darro, laakiin tartanka loogu jiro sii jiritaanka, tayada canabka, gaar ahaan muuqaalka farabadan, waxaa badanaa laga sii daayaa dareenka.
Fasal canab "Sofia"
Marwalba waa mid xiiso leh in lagu barto noocyo cusub oo canab ah, isla markiiba waxaa jira rabitaan ah in lagu koro warshadan iyada oo loo eegayo dhulkeeda. Qaar badan oo ka mid ah hindhistariyeyaasha hiwaayadda xitaa waxay billaabaan in ay ku daraan hal-abuurkooda iyo shirkadkooda iyagoo abuuraya Beelaha noocyo hore u gaar ah. Dabcan, dad badan ma ku guulaystaan ​​arrintan, laakiin waxaa jira kuwa jecel kuwa weligood ku qora magacyadooda kuxiran ee ku saabsan viticulture.
Caleemaha kala duwan "Asalka"
Waxaa suurtagal ah in ka mid ah akhristeyaasheena ma jiro qof keliya oo jecel canab, oo eber go'an. Ka dib oo dhan, canab ma aha oo kaliya dhadhan fiican leh, laakiin aad u faa'iido leh. Intaa waxaa dheer, ficil ahaanba mid kasta oo naga mid ah oo aan ku riyooneyno koritaanka dalagga ku dhow guriga ama guriga xagaaga. Ka dib oo dhan, dhirta this ma aha oo kaliya il oo ah miraha dhadhan fiican, laakiin sidoo kale qurxinta ugu wanaagsan ee dayrka iyo beerta.
Fasal canab ah "Delight"
Way adagtahay in ay ku koraan canab on guriga, sida dhirta this ma aha mid u adkaysata cuduro kala duwan, cayayaanka iyo dhaxan. Sababtan awgeed, kuwa ugu caansan waxay raadiyaan inay kala soocaan kala duwanaanta canabka, ma aha oo kaliya dhadhanka sare iyo dalagyo badan, laakiin sidoo kale xasilooni wanaagsan.
Caleemaha kala duwan "Jupiter"
Jacaylka canabka ee runta ah waxay had iyo jeer doonayaan in ay koraan noocyada ugu fiican ee goobta. Isla mar ahaantaana, shuruudaha qiimeynta waxay noqon karaan kuwa ugu kala duwan: qaabka farabadan, dhadhanka berry, mugga dalagga, iyo sii jiritaanka baadiyaha. Laakiin shuruud kale oo muhiim ah oo ay beelaha runta ah u fiirsadaan waa joogitaanka miraha beeraha.
Fasal canab "Lancelot"
Muxuu xagaaga nala wadaagaa? First of dhan, oo leh miraha cusub, khudaarta iyo nooca berry. Iyo sidee xagaa laga heli karaa canab? Dabcan, waxaad u geli kartaa dukaanka oo aad ka iibsan kartaa dad caan ah oo la yaqaan, laakiin waxaad weli ku kori kartaa canab on your gaar ah. Isla mar ahaantaana waxaad si dhab ah u hubin doontaa dabiicigeeda oo aad ku raaxaysato dhadhanka weyn.
Fasal canab "Sphinx"
Warshad sida canab ah waxay noqoneysaa mid aad u caan ah oo bannaanka u ah. Canabku waa alaabta dhabta ah ee mira-dhalinta waxtar leh iyo fiitamiino, kuwaas oo ah kuwo aan fiicneyn oo keliya in la cuno, laakiin sidoo kale soo saaraan alaabooyin kale oo kala duwan. Haddii aad rabto in aad la shaqeysid noocyo cusub oo canab ah, ka dib Sphinx wuxuu si toos ah u iftiimin doonaa beertaada.
Kala duwan ee canabka Harold
Horaantii, qiyaastii 50 sano ka hor, suuragal ma ahayn in lagu koro canab xagga woqooyiga. Hadda, iyadoo la horumarinayo sayniska xulashada, dadku waxay abuurayaan adkaysi badan oo kala duwan. Kala duwanaanta noocaas ah sidoo kale waa nooc ka mid ah "Harold", kaas oo helaya caan ahaan ma aha oo kaliya sababtoo ah dhadhankiisa, laakiin sidoo kale sababta oo ah iyada oo aan qabyo ahayn xaaladaha cimilada.
Fasal canab "Chameleon"
Waxaa jira noocyo badan oo sabiib ah oo ku habboon beertayda canabka ah. Furaha si aad u hesho goosashada fiican waa daryeelka saxda ah ee duurka, laakiin waxa laga yaabaa inaanay waqti badan u qaadin canab si siman oo casri ah ee nolosha. Taasi waa sababta Chameleon kala duwan, taas oo kaliya ma aha kaliya xidid ku dhow ciidda, laakiin sidoo kale uma baahna daryeel gaar ah, waa mid ku habboon beerto.
Kala duwanaanta canabka "Fun"
Si ay u koraan canab khafiif ah cimilada adag ee cimilada ee Yurub, uma baahnid inaad ahaato guru ah viticulture. Shaqadani maaha mid adag sida ay u muuqato. Taasina waa sababta aysan u adagtahay in la koro noocyo kala duwan sida "Zabava". Haddii aad go'aansato inaad ku beertid canabkani, ka dibna raac talooyinka hoose.
Fasal canab "Vodogray"
Ma rabtaa in aad canab koriso? Ma hubo noocyada kala duwan ee lagu beeray marka hore? Ma waxaad heli doontaa goosashada wanaagsan oo miisaan leh? Su'aalahani waxay qabaan jawaab fiican. Oo magaca jawaabtu waa noocyo kala duwan "Vodogray". Iyada oo daryeel ku habboon, duurka u of kala duwan tani waxay ku farxi ma aha oo kaliya muuqaalkooda muuqaalka cagaaran, laakiin sidoo kale leh goosashada wanaagsan.
Haddii aad go'aansato inaad ku beerto canab beertaada, ka dibna su'aalo sharci ah ayaa soo bixi doona, kan ugu horreeya ee uu noqon doono "iyo nooca geedka si ay u beerto?" Mid ka mid ah jawaabaha su'aashan waxay noqon kartaa midhaha "Helios". Xeryahan ee kala duwan tani waxay ku farxi doonaan oo kaliya ma leh muuqaalkiisa soo jiidasho, laakiin sidoo kale xaddiga goosashada.
Kala duwanaanta canabka "Blagovest"
Bannaanka beerta iyo xardheylayaasha ayaa si joogta ah u raadinaya noocyo badan oo cusub oo canab ah beerahooda iyo beerahooda. Sababtoo ah xaaladaha kala duwan ee cimilada, dhammaan noocyada dhirta ee dhirta ah waxay qaadataa xidid, sababtoo ah mararka qaarkood duurka ma hor istaagaan barafka cimilada Yurub ee dabiiciga ah. Laakiin noocyada kala duwan sida "Blagovest" waa ku habboon cimilada iyo ciidda waxayna ku farxi doonaan miraha dhadhan fiican leh.
Caleemaha kala duwan "Timur"
Canabku waa dhaqan aad u qoto-dheer, taas oo ah, si kastaba ha ahaatee, si dhaqso ah ayuu u kobcay isla markaana u koraya qarniyo badan. Gaar ahaan xeelad weyn ayaa lagu sameeyey xulashada macmalka, natiijooyinka kuwaas oo horey u tiriyay kumanaan noocyo kala duwan. Sababtan awgeed, xitaa guuleyste aad u qibrad badan ayaa lumi kara madaxiisa markii lala kulmo fara badan.
Fasal canab "Rumba"
Maanta, canabku waxay joogsadeen inay noqdaan geedka oo laga yaabo in lagu koro dalal diiran. Breeders waxay isku dayayaan in ay keenaan noocyo badan oo cusub oo ka mid ah this berry, hagaajiyaan sifooyinka ay. Beeraley kasta oo ku riyoodaya beerta beertiisa gaarka ah ee shuruudaha wiqiyeyaasha aadka u daran ayaa si ammaan ah u geli kara ubaxyada safarka ah oo aan walwal laga qabo goosashada mustaqbalka.
Fasal canab "Augustine"
Dadkani kala duwan waxay ku koraan canab si ay ujeedooyin kala duwan: qaar ka mid ah "naftooda", kuwa kale waxay sameeyaan xirfadahan, waxayna ku kasbadaan iibinta dalagyada, halka kuwo kalena ay ku dadaalaan inay ku yeeshaan warshad qurxin badan oo dhulkooda ah oo si quruxsan u duuban hareeraha guriga ama hareeraha. Hase yeeshe, waxaa jira beeralayaal kuwaas oo soo sheega dadaal kasta oo lagu helo noocyo kala duwan oo isku dari kara dhammaan hawlaha kor ku xusan.
Kala duwanaanta canabka "Viking"
Maanta, aagga beeritaanka canabka ayaa joojiyay in ay ku koobnaato dhulka koonfureed. Thanks to hababka cusub ee taranta iyo ilaalinta, dhalatada iyo fruiting canab ah waxay bilaabeen inay ka muuqdaan in ku dhow beerta oo dhan. Waxaa jira noocyo badan oo sabiib ah oo kala duwan, kuwaas oo ku kala duwan muuqaalka iyo dhadhanka.
Fasal canab "Ruslan"
Viticulture waxay muddo dheer joogsadeen inay noqdaan beerta ama geedaha koraya. Dad badan, geeddi socodka canabka sii kordhaya waa hiwaayad dhab ah iyo macnaha nolosha, taas oo, gaar ahaan, ma keeni karto oo kaliya farxad, laakiin sidoo kale ammaanka qalabka. Waxaa ka mid ah roodhida, oo ka soo baxay hiwaayad sahlan si xirfadlayda runta ah ee goobtooda, mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa V.
Kala duwanaanta canabka "Gala"
Ilaa imminka, koraan xayawaanka aan la karin. Wax kasta oo kala duwan, oo leh daryeel ku habboon waxay dhali doontaa miro iyo fadlan indhaha beerta. Beerleeyda ma aha oo kaliya dhismayaasha quruxda badan ee dhismahooda, laakiin sidoo kale faa'iido leh marka loo eego goosashada. Waxa kale oo aad ka buuxin kartaa canabkiina canabkiina "Gala" canab.